Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay dagaal ka dhacay magaalada Baydhabo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 15 qof oo ku dhimatay dagaal ka dhacay magaalada Baydhabo
June 9, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. [Sawirka: Puntland Mirror]
Baydhabo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kadib markii uu dagaal dhexmaray ciidamo kawada tirsan maamulka Koonfur Galbeed, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa waxa uu ka bilaabmay raashin loo qeybinayay dad masaakiin ah, sida ay wararku sheegayaan.
Dadka dagaalka ku dhintay ayaa waxay u badanyihiin dad shacab ah, sidoo kale waxaa ku jira ciidamadii dagaalamay.
Sagaal qof oo kale ayaa ku dhaawcmay intii uu socday dagaalku.
Madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan oo ka hadlay dagaalka waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday dagaalka.
Shariif Xasan ayaa sheegay in dhaqso gacanta lagu soo dhigi doono cid walba oo ku lug lahayd dagaalkaas dhimashada sababay.
Ugu yaraan 84 qof ayaa dhimatay 100 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii nin uu gaari xamuul ah si kas ah u dul mariyay dad xusayay maalinta Bastille gudaha magaalada Nice ee dalka Faransiiska. Ninka [...]